လယ်သမားဘ၀ကနေ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာရောက်လာတဲ့ လက် ၆ ချောင်းနဲ့ ဆာမူရိုင်းက !!? - JAPO Japanese News
ဟူး 22 Jan 2020, 16:45 ညနေ
豊臣秀吉 Hideyoshi Toyotomi လို့ခေါ်တဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က 戦国時代 Sengokujidai ဆိုတဲ့ခေတ်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အရင်အချိန်တုန်းက မိဘရဲ့ လုပ်ငန်းကို သားသမီးက ပြန်လက်လွှဲယူရတော့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် သေချာပေါက်ကိုယ်ဟာ ဆာမူရိုင်းမိသားစု၀င်တစ်ယောက် ဖြစ်နေရမှာပေါ့..
ဒါပေမဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ လယ်သမားမိသားစုကနေ မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။
လယ်သမားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ရမယ့်သူက ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နံပါတ်တစ်ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကြီးကြီးကိုမက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ 織田信長（おだ　のぶなが）Oda Nobunaga လို့ခေါ်တဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ ၀ေယျ၀စ္စ၊ တောက်တိုမယ်ရ လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလည်း လုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်သမားလေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်……..
ဒီပုဂ္ဂိုလ်က လယ်သမားမိသားစုကနေမွေးလာပေမဲ့ ဥာဏ်အတော်ကောင်းတဲ့လူ
သူ့ရဲ့ ဖျတ်လက်မှု၊ ထူးချွန်မှုတွေကိုလည်း စာအုပ်တွေထုတ်ပြီး၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ပြန်ရိုက်ထားကြတယ်။
ဆောင်းတွင်းရဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာတော့ သူ့ဆရာ信長Nobunaga ဆာမူရိုင်းက အပြင်ထွက်မယ်အလုပ် စီးစရာ ဖိနပ် (草履 Zouri ရှေးဂျပန်ရိုးရာဖိနပ်) ကမရှိဘူး။
ဥာဏ်ကြီးရှင် Hideyoshi တစ်ယောက် သူ့အိင်္ကျီရင်ဘက်ထဲမှာ ကြိုထည့်ထားတဲ့ ဖိနပ်တစ်စုံကို သူ့ဆရာကို လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းအေးစိမ့်နေပေမယ့် ဖိနပ်က Hideyoshi ရဲ့ အိင်္ကျီထဲကနေ ထုတ်ပြီးခါစဆိုတော့ Nobunaga စီးလိုက်တဲ့အခါ “နွေးလိုက်တာ” ဆိုပြီး ကျေနပ်သဘောကျသွားပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းကြီးခမျာ Hideyoshi ရဲ့ ကြိုတင်အကွက်ချတာကို မသိဘဲ Hideyoshi ကိုအမှတ်တွေပေး သဘောတွေကျသွားတာပေါ့..
အဲ့ဒီလို Hideyoshi က ဥာဏ်များပြီး အလိုက်သိသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဆာမူရိုင်းကြီးဟာ Hideyoshi ရဲ့ အနေအထိုင် အပြုအမူတွေကို နှစ်သက်လာတဲ့အတွက် တောက်တိုမယ်ရအလုပ်သမား ဘ၀ကနေ အဆင့်တိုးမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Hideyoshi ကိုယ်တိုင်ကလည်း တပည့်ခံချင်ကြောင်း ထုတ်ပြောလိုက်တာပေါ့။
Hideyoshi က လူကောင်ကလည်းသေးတော့၊ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး “မျောက်ကြီး” “အမွှေးမရှိတဲ့ ကြွက်စုတ်” လို့ အားလုံးကသူကို လှောင်ပြောင်ပြီး နာမည်ပြောင်တွေပေးနေပေမဲ့ သူကတော့ အေးဆေးပဲ။ ကရုတောင်မစိုက်ပါဘူး။
တိုင်းပြည် တစ်ပြည်နဲ့တစ်ပြည် စစ်ကြေငြာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ တပ်သားတွေ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် သူက ထောင်ချောက်တွေချပြီး တိုက်ကွက်ဆင်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ စစ်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်လာပြီး၊ မမျှော်လင့်ဘဲ သူ့ဆရာ Nobunaga ဆာမူရိုင်းကြီးရဲ့ အားအကိုးရဆုံး လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ပြောရရင်တော့ စစ်သူကြီးပေါ့။
နောက်ပိုင်း သူ့ဆရာ လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အချင်းချင်းကွဲပြားနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို စည်းလုံးဖို့အတွက် ဆရာ့ကိုယ်စား သူဆက်ကြိုးဖမ်းမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ ရာဇ၀င်တွင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကတစ်ယောက် လို့လည်း ပြောစမှတ်ပြုကြတယ်ပေါ့…
ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ အခုမှစမှာ။ ဘာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ လက်မက ၂ ချောင်းဖြစ်နေတာပါ…။
先天性多指症（せんてんせい　たししょう）Congenital polydactyly လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပေါ့။ အရင်တုန်းကပဲ ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်အထိ ဖြစ်နိုင်ချေတွေရှိနေတယ်။
ကုသဖို့နည်းလမ်းကတော့ “ပိုနေတဲ့လက်ကို ဖြတ်ပစ်ရုံကလွဲပြီး မရှိဘူး”။ အရင်တုန်းကရော၊ အခုချိန်ထိရော ကုသဖို့ဆေးမရှိပါဘူး။ မွေးကတည်းကပါလာတယ်ဆိုတော့လည်း…..
Hideyoshi တို့အချိန်တုန်းကလည်း ဆာမူရိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းညီမင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလက်ပွားလေးတွေ ပါလာပြီဆိုရင် ကလေးဘ၀ကတည်းက အဲ့လက်ပွားတွေကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။
လက် ၆ ချောင်းဖြစ်နေလို့ မလွတ်လပ်ဘူး၊ သူ့ဟာသူကပ်နေပေမယ့် ဒီအတိုင်းမထားချင်တာကြောင့် ဖြတ်ပစ်လိုက်တာပါတဲ့။
သို့ပေမဲ့လည်းပေါ့… Hideyoshi မွေးဖွားလာတာက လယ်သမားမိသားစုဆိုတော့က အဲ့လောက်အထိလည်း ဗဟုသုတ အသိပညာတွေမရှိကြတော့ ကြီးလာတဲ့အထိအဲ့အတိုင်း မွေးရာပါလေးဖြစ်သွားတာ…
အရိုးနုတုန်း ဖြတ်ပစ်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့!!!
တစ်ချို့လူတွေဆို လက်အပိုလေးကြောင့် အနိမ်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့…
အနိမ်ခံရတဲ့လူတွေကလည်း စိတ်နာပြီး လက်ပွားပါတဲ့ဘက်ကို မသုံးတော့ဘဲ၊ ပုံမှန် ၅ ချောင်းပဲရှိတဲ့လက်ကို အထိကထားသုံးလိုက်တော့တယ်တဲ့…
Hideyoshi ကတော့ လက်အပိုလေးပါလာပေမဲ့၊ သူ့ရဲ့ထူးချွန်မှုတွေ ပါရမီတွေကြောင့် ဂျပန်မှာ နံပါတ်တစ်ဖြစ်လာပြီး၊ သူ့အရှေ့မှာ ဘယ်သူမှ သူ့အကြောင်း အတင်းမတုတ်ရဲကြပါဘူး……
ယနေ့ခေတ် စစ်တမ်းကောက်ချက်အရ လက် ၆ ချောင်းပါတဲ့လူတွေက ပုံမှန်လူတွေထက် ဥာဏ်ပိုကောင်းကြတယ်လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်တဲ့…
အောက်က link ထဲမှာ အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးက လက်ပွားလေးတွေပါလာတာပေါ့
ဒါပေမဲ့သူက ဖိနပ်ကြိုးကို ရိုးရိုးလက်နဲ့ချည်ပြလိုက် လက်ပွားလေးတွေနဲ့ချည်ပြလိုက် video လေးရိုက်ထားတာပါ။ နောက် ကွန်ပျူတာ ကီဘုတ်သုံးတဲ့အခါမှာလည်း ပုံမှန်လက် ၅ ချောင်းပဲရှိတဲ့လူထက် ပိုပြီးမြန်နေတယ်နော်
ပိုလို့အလကားဖြစ်တာမရှိဘူးနော်… ပိုလုပ်နိုင်တာပဲရှိတယ် တဲ့…
အဲ့ဒီ ၆ ချောင်းမြောက်လက်ပွားလေးက အားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့ကိုလည်း ခိုင်းလို့ရပါတယ်တဲ့..
ဦးနှောက်ကလည်း ဒီလက်ပွားလေးကိုသုံးဖို့ Control လုပ်နေတာကြောင့် ပုံမှန်လူထက် ဦးနှောက်ကပိုအလုပ်လုပ်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
လက်ပွားတွေပါတဲ့လူဘက်နေကြည့်ရင် “သူတို့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ ပိုလို့တောင် အလုပ်ဖြစ်သေးတယ်။ လက် ၅ ချောင်းပဲပါတဲ့ လူတွေကမှအဆင်မပြေဖြစ်ကြတာပါ” တဲ့..
ကဲ.. ကြည့်ကြပါအုံး.. သူများနဲ့မတူလို့ အားငယ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိဘူးနော်….
Hideyoshi ကလည်း လယ်သမားမိသားစုကနေ မွေးလာတော့ လက်ပွားလေးကို ဖြတ်ခွင့်မရလိုက်လို့များ ဒီလိုထူးချွန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာတာလားမသိဘူးနော်…….
ဂျပန်သမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ အစားအစာများ !!!!